အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်းများအတွက် Trabzon လှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ပြီး! - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ61 Trabzonအလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်းများအတွက် Trabzon လှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ပြီး!
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 61 Trabzon, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
အဆိုကိုအပေါ် Trabzon ရဲ့အလင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအားလွန်ခဲ့သည်
Trabzon ပြုခံရဖို့ထင် Trabzon တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဥက္ကဌ Murat Zorluoğlကောင်စီအစည်းအဝေး, အလငျးရထားစနစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပေါ်အခွအေနေ shared ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Zorluoğl "ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းသည်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးယခင်ကပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအတော်လေးငွေကုန်ကြေးစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်း 2018 ။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုမွမ်းမံဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုအရသိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုများစတင်ပါပြီဒီနှင့် ဆက်စပ်. ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ကြီးဌာန, ငါတို့အခြေခံအဆောက်အအုံ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအကြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနှင့်အတူဖန်တီးပါ။ ဤအသင်းကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ စီမံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရ၏မူဘောင်အတွင်းအဆောက်အဦ, ငါတို့ဘဝကတဆင့်သွားကြဖို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါမြို့ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းတစ်ခုကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်လိမ့်မယ်။ ငါကအလွန် Trabzon ငါ့ကိုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပရိဘောဂအဖြစ်မြို့ပြမြို့ကြီးများမှသာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ရထားလမ်းစနစ်များ, သီးခြား Air-added စီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦကျွန်ုပ်တို့သည်မှုတွင်အတွက်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်စီမံကိန်းများကိုနေကြတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ (Xnumxsaat)
Suveren-Güzeltepeမီးရထားလမ်းမှလှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ပြီးခဲ့သည် 23 / 06 / 2014 နှစ်ပတ်လည် 650 တူရကီနှင့်အတူတထောင်တန် Suveren-Güzeltepeအဆိုပါမီးရထားလမ်းမှအစပျိုးခဲ့ငယ်ရွယ်သံသိုက်မှ၎င်း၏သံသတ္တုရိုင်းထုတ်လုပ်မှု၏ 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြည့်ဆည်းမည်သည့်: အမီးရထားလမ်းများအတွက်လုပ်ဆောင်ချက် Suveren-Güzeltepe။ တရားမျှတရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပါတီ (AK ပါတီ) Bingol လက်ထောက် Ashraf ကျောက်ခေတ်, သတ္တုရိုင်း Pre-qualification များအတွက် 17,2 ကုမ္ပဏီဖိုင်တွေပေးသော 19 ကီလိုမီတာရထားလမ်းစစ်တမ်းစီမံကိန်းကိုအကြားကမ္ဘာကြီးကို Suveren-Güzeltepeများ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုသူကဆိုသည်။ ပါလီမန်၏လုပ်ရပ်ဖော်ပြရထားလမ်း Suveren-Güzeltepe၏ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်ကမ္ဘာ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးပွားလာခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးကိုပေးလိမ့်မည်သည့်ငယ်ရွယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှသံသိုက်တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသံသိုက်, ...
Metrobus ဘေးအန္တရာယ်ပြီးနောက်ရွေ့လျားမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည် 24 / 09 / 2016 အဆိုပါ Metrobus ဘေးအန္တရာယ်ပြီးနောက်ရွေ့လျားမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်: IMM CHP ညီလာခံတွင်အဖွဲ့ဝင် Mesut Kosedagi, ထို့နောက်ယနေ့အတွေ့အကြုံရှိရရှိခဲ့, မတော်တဆမှု '' ယာဉ်မောင်းခန်း '' ၏အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်များအတွက် Metrobus ယာဉ်မောင်းများ၏လုံခြုံရေးနှင့်အဆိုပြုချက်ထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်။ CHP အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး Massoud Kosedagi ဖြစ်လျှင်, ယနေ့ Metrobus ဒရိုင်ဘာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကျိုးအမြတ်ကြုံတွေ့နှင့်လျော့နည်းမတော်တဆမှုလျှော့ချသည့် IMM များအတွက်ပါလီမန် rostrum ကနေပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်များတောင်းဆိုလိုက်သည်။ အငှားယာဉ်မောင်းတအဆိုပြုလွှာကို Kosedagi, ဒဏ်ရာရအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုသောအားဖြင့်သူ၏မိန့်ခွန်းကိုစတင်အဆိုပါယာဉ်မောင်းကနေလေယာဉ်အဖြစ်ဥရောပ၌ခရီးသည်ခွဲခြားကြောင်းချမှတ်ခြင်းအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ Kosedagi အချိန် Metrobus နည်းနည်းပြီးနောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတောင်းဆိုရန် "Metrobus ၏လုံလောက်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတဆင့်ဖြတ်သန်းခုခံကာကှယျ။ ထို့ကြောင့်လစ်လပ် ...
Pekşen Trabzon အလင်းရထားနှင့်မီထရိုစနစ်များညီလာခံဖို့စေ့ဆျော 15 / 10 / 2015 Pekşen Trabzon အလင်းရထားစနစ်နှင့်မီထရိုဘုတ်အဖွဲ့မှစေ့ဆျော: CHP Trabzon လက်ထောက် Haluk Pekşen, အလင်းရထားလမ်းနှင့်မီထရို Code ကိုဘူတာရုံ၌မိုဃ်းရေအတှကျသည့်အရေးမဆိုထားသောလျှင် Kahramanmaras လမ်းထဲမှာကုန်ဆုံး 1 နိုဝင်ဘာလ TBMM Trabzon ပြီးနောက်ဆိုင်းငံ့နိုင်ငံသား Trabzon ၏ status တုံ့ပြန် သူအဆိုပြုချက်ကိုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ Trabzon ၏ကားမောင်း "ကမ္ဘာတွင်မြို့ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါစဉ်အပြည့်အဝမှတ်တိုင်အဖြစ်မော်တော်ယာဉ်ကနေဆငျးသမိုးရေထဲမှာစောင့်ဆိုင်းနိုင်ငံသားများ၏ Kahramanmaras လမ်းPekşenအထွက်ဘက်မှာ။ သင်သည်အမှုရောက်သောယာဉ်ရှာတွေ့ရှိခြင်းနေကြသည်ကိုသင်မိုးရေထဲမှာရေတွင်းတစ်တွင်းမျှော်လင့်ထားရာအရပ်သို့ရောက်ရှိ။ ဒီဘူတာရုံ၏လူ့ thumbnail ကိုပိတ်။ ဒီစားပွဲထိုက်သူမြား၏ဘက်မှာ Trabzon ကလူ ...
Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်း Downtown ရေးစင်တာ -2အကြား Yenikent ။ ဇာတ်စင်အလင်းရထားလိုင်းလည်း system ပေါ်တွင်အလုပ်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် 25 / 07 / 2012 Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သမ္မတ, "Arcade ရေးစင်တာ -2အကြား Yenikent ။ ဇာတ်စင်အလင်းရထားလိုင်းစီမံကိန်း "အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှဆက်စပ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Pre-ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများ၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပဏာမစီမံကိန်းများနှင့်လေ့လာမှုများဆက်လက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကလေ့လာမှုနှင့်စီမံကိန်းများ၏ဘာသာရပ်အပေါ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းအရာရှိတွေကသူတို့တင်ဒါများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနေ့က 480 လိမ့်မယ်အဖြစ်လေ့လာမှုပြီးစီးပြီးနောက် 2013 တစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးမည်ဖြစ်သည်။ ပိုပြီးသတင်းအဘို့, နှိပျပါ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်: Investments
Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်း Downtown ရေးစင်တာ -2အကြား Yenikent ။ ဇာတ်စင်အလင်းရထားလိုင်းလည်း system ပေါ်တွင်အလုပ်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် 30 / 07 / 2012 Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သမ္မတ, "Arcade ရေးစင်တာ -2အကြား Yenikent ။ ဇာတ်စင်အလင်းရထားလိုင်းစီမံကိန်း "အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှဆက်စပ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Pre-ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများ၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပဏာမစီမံကိန်းများနှင့်လေ့လာမှုများဆက်လက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကလေ့လာမှုနှင့်စီမံကိန်းများ၏ဘာသာရပ်အပေါ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းအရာရှိတွေကသူတို့တင်ဒါများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနေ့က 480 လိမ့်မယ်အဖြစ်လေ့လာမှုပြီးစီးပြီးနောက် 2013 တစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လူသိများသည်နှင့်အမျှ, ဇန်နဝါရီလ 04 2012 တစ်ရက်ဟာယပူဇော်သက္ကာအတွက်စုဆောင်း "စနစ်များ Consulting Service ၏ပဏာမဒီဇိုင်းနှင့်အတူအကြိုလေ့လာမှု၏ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးဦးစားပေးပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုများနှင့်အဘိတ်က" အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုကMescioğluများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ ...
Trabzon LRT လမ်းကြောင်း
Trabzon ပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကို
Pekşen Trabzon အလင်းရထားနှင့်မီထရိုစနစ်များညီလာခံဖို့စေ့ဆျော
Trabzon အထူးအဖွဲ့အလင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွက်ကို set up ခဲ့သည်